Khabar Kantipur » खुशीको खबर:कतारका मलहरुमा यसरी पाईन थाल्यो ‘मेड इन नेपाल’ तरकारीहरु
खुशीको खबर:कतारका मलहरुमा यसरी पाईन थाल्यो ‘मेड इन नेपाल’ तरकारीहरु
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भने पनि उब्जनीको कुनै मूल्य नभएपछि कृषकहरूलाई खेती गर्न कसरी मन लाग्छ र? अब नेपालबाट पहिलोपटक तरकारी विदेश निर्यात हुन थालेको छ। ‘अलसमन इन्टरनेसनल नेपाल’ कम्पनीले नेपालमा उत्पादन भएका तरकारी कतार निर्यात गर्दै आएको छ। कम्पनीले १ जनवरी अर्थात् पुस १७ गतेदेखि कतारमा तरकारी निर्यात गर्दै आएको कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर कल्याण घिमिरेले बताए।
नेपालमा उत्पादन भएका गुन्द्रुक, ऐलोभेरा, तितेकरेला, भिन्डी, गाँजर, लौका, फर्सी, काउली, बन्दा, गोलभेडा लगायत अन्य तरकारी कम्पनीले निर्यात गर्दै आएको
‘हामीले २०१८ देखि नै तरकारी निर्यात गर्न थालेका थियौं, तर २०१९ जनवरी १ देखि चाहिँ निरन्तर पठाउँदै आएका छौँ’, उनले भने। उनका अनुसार कम्पनीले साताको दुईचोटि आइतबार र बुधबार अर्डरबमोजिम तरकारी कतार पठाउँदै आएको छ। नेपालमा उत्पादन भएका गुन्द्रुक, ऐलोभेरा, तितेकरेला, भिन्डी, गाँजर, लौका, फर्सी, काउली, बन्दा, गोलभेडा लगायत अन्य तरकारी कम्पनीले निर्यात गर्दै आएको छ।
उनीहरूले पाँचखाल, थानकोट, सिन्धुली र दहचोकबाट तरकारी ल्याइरहेका छन्। त्यसबाहेक नपुगेको अवस्थामा सहकारी र कालिमाटीबाट पनि किन्ने गरेको उनी बताउँछन्।
‘पहिला त कालिमाटीबाटै तरकारी किन्थ्यौँ। त्यहाँ धेरै महँगो किनेर पनि किसानले मूल्य नपाएको देखेपछि हामीले प्रत्यक्ष किसानसँगै तरकारी किन्न थाल्यौँ,’ उनले भने। उनका अनुसार अहिले उनीहरूले पाँचखाल, थानकोट, सिन्धुली र दहचोकबाट तरकारी ल्याइरहेका छन्। त्यसबाहेक नपुगेको अवस्थामा सहकारी र कालिमाटीबाट पनि किन्ने गरेको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार यहाँबाट गएको तरकारी कतारका ‘व्यापारिक मल’ मा बेचिँदै आएको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकका नागरिक यसका प्रमुख ग्राहक हुन्। एकचोटिमा ३-४ लाख रूपैयाँ बराबरको १५ सय केजी तरकारी निर्यात हुँदै आएको छ।उनी यसबाट आफूलाई राम्रै आम्दानी भएको बताउँछन्। किसानले फलाएका तरकारी आफूलाई दिन उनले किसानसँग आग्रह गरेका छन्।
कतारको बजारमा नेपाली तरकारीको माग अत्यन्तै राम्रो छ। सरकारले मद्दत गरे दिनमै ३-४ हजार किलो लैजान सक्ने उनी बताउँछन्। अहिले तरकारी लान कार्गो महँगो र क्वारेन्टाइन चेक ढिलो हुँदा विमानस्थलमा घन्टौं लाग्छ। यसले तरकारी कुहिने समस्या छ।
उनी फिल्म ‘अशंबन्डा’ का नायक र ‘श्रीमान’ र ‘महशुस’ फिल्मका निर्माता हुन्।
सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको कोल्ड स्टोरमा तरकारी राख्ने व्यवस्था र नेपाल एयरलाइन्सको यताबाट जाने खाली कार्गोमा तरकारी लाने व्यवस्था गरिदियो भने निर्यातमा सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन्। उनी एक्लैले तरकारी निर्यात गरेका होइन्। उनका साथमा तीन जना छन्। उनले कतारमा पनि ‘अलसमन ग्लोबल नेपाल’ भन्ने कम्पनी खोलेका छन्।
कतारमा ती तरकारी ‘मेड इन नेपाल’ भनेर बेचिने गरेको देख्दा आफूलाई खुसी लाग्ने गरेको उनी बताउँछन्।
उनलाई तरकारी निर्यात गर्नमा कम्पनीका सल्लाहकार विष्णु भुसाल, कतारका लागि निवर्तमान नेपाली राजदूत डा. रमेश कोइराला र नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुप हेलले सहयोग गरेको उनले बताए। घिमिरे फिल्म इन्डस्ट्रिबाट तरकारी व्यवसायमा आएका हुन्। उनी फिल्म ‘अशंबन्डा’ का नायक र ‘श्रीमान’ र ‘महशुस’ फिल्मका निर्माता हुन्।
‘महशुस’ फिल्म चलाउन कतार गएका बेला नेपालमा किसानहरूले तरकारी फ्याँके, डोजर लगाए भन्ने सुनेपछि नेपाली तरकारी कतार ल्याउने सोच आएको उनी बताउँछन्।‘म फिल्म रिलिज गर्न कतार पुगेको थिएँ। त्यहाँ बस्दा नेपालमा किसानहरूले तरकारी फ्याँके, बारीमा डोजर लगाए रे भन्ने सुनेपछि यहाँ तरकारी ल्याउने सोच आयो,’ उनले भने।
त्यही सोचअनुरूप उनले कतारका सबै व्यापारिक मलमा पुगेर नेपालमा उत्पादन भएका तरकारी किनिदिन आग्रह गरे।‘सुरूमा नेपालले आफैं त भारतबाट ल्याउँछ, हामीलाई कसरी तरकारी दिन सक्छ भनेर पत्याएका थिएनन्,’ उनले भने, ‘पछि मैले धेरैपटक भनेपछि केही समय परीक्षणका रूपमा ल्याउनू भने।’
परीक्षणकै रूपमा आफूले उनीहरूको अर्डरबमोजिम तरकारी उपलब्ध गराएपछि नेपाली तरकारीको माग बढेको उनी बताउँछन्। उनीहरूले तरकारी बाकसमा प्याक गरेर निर्यात गर्दै आएका छन्। कतारमा ती तरकारी ‘मेड इन नेपाल’ भनेर बेचिने गरेको देख्दा आफूलाई खुसी लाग्ने गरेको उनी बताउँछन्।
पुदिना र क्यान्सर
पुदिनामा औषधि गुण छ भन्नेकुरा अधिकांशलाई थाहा नहुन सक्छ । गाउघरमा हामीले चट्नीको रूपमा पुदिना खाने गरेका छौं । प्रकृतिले हामीलाई औषधि दिएको छ । पुदिना ग्यास्टिक लगाएत पेटका रोगीलाई राम्रो फाइदा गर्दछ । पुदिनामा भिटामिन ए पाइने भएकाले पनि यो धेरै उपयोगी भएको छ ।
पुदिनामा क्यान्सरसँग लड्न अद्भूत क्षमता हुन्छ । शरीरभित्र भएको कतिपय ब्याक्टेरियाको वृद्धिदर रोक्दछ । त्यसैले दम एलर्जीजस्ता रोगमा पुदिना ज्यादै उपयोगी मानिन्छ । यसमा पेरिलिन, अल्कोहल नामक एउटा फाइटो न्यूटि्रन्टस हुन्छ । जसले कोलोन, छाला र फोक्सोको क्यान्सर रोक्दछ ।
यसले गाँठा, गुँठीको रक्तकोषिकामा प्रहार गर्दछ । पुदिना कटु उष्ण, दीर्घ, दीपक तथा कफ वायु उल्टी, पेटको दर्द, वातनाशक गुण यसमा पाइन्छ । आमाशयलाई शक्ति दिन्छ । गर्भाशयलाई सक्रिय पार्ने, मासिक धर्मको अवरोध हटाउँछ । पुदिनाले उच्च र निम्न रक्तचापसमेत नियन्त्रण गर्छ ।
पुदिनाको अचार बनाएर खादा खाना राम्रो संग पच्ने खाना धेरै खाइने हुन्छ । आजकल आयुर्वेदिक कम्पनीले पुदिनाको तेलको टेब्लेट बनाएर बजारमा पठाएको छ । पुदिना रोपौ स्वास्थ्य लाभ उठाउँ पुदिना लोप हुनबाट जोगाउ भन्ने नारा सबैले उठाउन आवस्यक भइसकेको छ । आजको लेखमा मैले पुदिनाको प्रयोग बारे प्रकाश पार्ने छु ।
पुदिनाको अन्य प्रयोग
१) पुदिनाको पात पिसेर त्यसको लेप अनुहारमा लगाउँदा दाग, धब्बा निको हुनुका साथै मुहार चम्किलो हुन्छ ।
२) ज्वरो आएको बेला पुदिना र तुलसीको पात पानीमा उमालेर सेवन गर्दा ज्वरो ठीक हुन्छ ।
३) पुदिना, तुलसी, अदुवा ,बिरेनुन र कालीमरिचलाई मिलाएर पानीमा उमाल्नुहोस् । जुन रस ग्यास्टिक समस्या भएकाले लगातार सेवन गर्दा जरैदेखि समस्या समाधान हुन्छ ।
४) यदि सानो बच्चालाई गर्मीका कारण झाडापखाला लागेको छ भने पुदिनाको पातलाई पानीमा उमालेर दिनमा दुईदेखि तीन पटक दुई,दुई चम्चा खुवाएमा झाडापखाला निको हुन्छ ।
५) यसको चटनी (अचार) बनाएर नित्य खाएमा पेटको सबै समस्या निको हुन्छ ।